OZI IWU IWU -Cofttek
Mbido > Njem iji chọpụta Egg
Njem iji chọpụta Egg
NTADR R ỌR RR FREE N’efu
Mgbasa ozi Ultraviolet
Arụrụ dị arọ nke igwe
RADICALS & Ọrịa
Dị ka ọ na-adịkarị, ihe ndị na-eme ka ihe dị mkpa dị mkpa maka ahụ, mana oke ihe na-akpata free nwere ike ime ka adịghị arụ ọrụ physiological, wee duga nrụgide oxidative na-agbanwe n'ọrịa dị iche iche (akwụkwọ ọgụgụ na-egosi na ndị na-akpata ọrịa bụ isi iyi nke ọrịa dị iche iche).
Ahụ anyị enweghị ike ịrụ ọrụ na-enweghị oxygen, na mgbe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ndị na-enweghị onwe ha na-abawanye, ahụ dị n'okpuru nrụgide oxidative ga-eme ka usoro ndozi ahụ ghara ịdapụ na-ewepụ radical free. N’ọnọdụ pụrụ iche, ahụ chọrọ mejupụta antioxidants in vitro iji wepu oke ihe ọkụkụ na-enweghị isi.
Ọganihu nke ndị ANTIOXIDANTS
L-ERGOTHIONEINE – Tdị ỌH NEWR NEW NKE ANY AN NA-EME
NGG bụ ihe eke chiral amino-acid antioxidant biosynthesized na ụfọdụ bacteria na fungi. Ọ bụ ihe dị mkpa bioactive nke e jiri mee ihe dị ka onye na-atụgharị egwu, ihe ntanetị na-eme ka ultraviolet ray, onye na-achịkwa mmeghachi omume nke oxydation na cellular bioenergetics, na usoro physiology, wdg
L-Ergothioneine (EGT, ERGO, CAS: 497-30-3), makwaara dị ka (S) -α-Carboxy-2,3-dihydro-N, N, N-trimethyl-2-thioxo-1H-imidazole- Ntan 4-ethanaminium dị n’ime ya, bụ nke Tanret C wepụrụ ya na mbu na 1909, emesia achọpụtakwa n’ime ọbara anụmanụ. EGT dị ọcha bụ kristal na-acha ọcha, na-agbanye mmiri, (etisasịwo 0.9mol / L na okpomọkụ ụlọ). Xchekwa onwe onwe apughi ibia nihe omumu pH ma obu na alkaline siri ike. EGT nwere ike ịdị n'ụdị abụọ isomer - ụdị thiol na ụdị thione, dị ka egosiri n'okpuru:
Na uru nke ọtụtụ ọrụ, NGG pụtara ìhè n'etiti ọtụtụ antioxidants ndị ọzọ.
Site na uru nke ọtụtụ ọrụ, EGT pụtara ìhè n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ antioxidants.A bara uru (ma e jiri ya tụnyere glutathione, cysteine ​​wdg):
——EGT dị mfe njupụta na mkpụrụ ndụ ma ịta ahụhụ kwụsie ike karịa antioxidants ndị ọzọ.
——EGT na-arụ ọrụ nke ọma n'ibelata ọnwụ mkpụrụ ndụ nke pyrogallol kpatara.
——EGT tumadi scavenges ROS iji gbochie ọxịdashọn, ebe glutathione na ndị ọzọ na - atụgharị ndị na - enweghị ihe ọ bụla, ya bụ, ndị ọzọ antioxidants scavenge ọxịdashọn ngwaahịa.(1) Oleoylethanolamide (oea) - anwansi anwansi nke ndu gi
Results: NGG bụ onye na-arụ ọrụ kachasị arụ ọrụ nke free radicals ma e jiri ya tụnyere antioxidants kpochapụwo dịka GSH, uric acid na trolox. Karịsịa, ikike antioxidant kachasị elu nke EGT vs. peroxyl radicals gosipụtara 25% dị elu karịa uru enwetara na ntụpọ antioxidant antioxidant. Ike ntụgharị nke EGT maka hydroxyl radicals bụ 60% dị elu, ma e jiri ya tụnyere uric acid, nke na-anọchite anya ntụpọ antioxidant vs. hydroxyl radicals. N'ikpeazụ, EGT gosipụtara ọrụ antioxidant kachasị elu na-aga n'ihu peroxynitrite, yana ikike ngbachapu 10% karịa nke uric acid.
OGWU NWA OMA
EGT nwekwara mmetụta na nhazi nke ike intracellular,
na - eme ka ihe ndị nwere ike ịdọrọ mmadụ,
mee ka nkpuru nwoke ghara idiwanye,
ikpuchi umeji site na mmerụ ahụ,
ntụpọ na mmepe.
Mkpa nke mmepe
A NA-AHU EGT N'IME N'INLU N'ALITE NA IMLỌ
5-10mg kwa otu maka okenye na 2-3 nkeji na-aga n'ihu oriri dị oké mkpa na gị kwa ụbọchị nri.
Ebe e si nweta ya: Li Yiqun, Zhou Nianbo. Ọrụ bayoloji na Ngwa nke EGT [J]. Nchịkwa nri ， 2010，9 （3） ： 26-28.
Edepụtara ihe ndị dị ka ndị a:
Mụaka (afọ 3-11) 0 XNUMX mg / ụbọchị
Ntorobịa (afọ 11-21) ≤30 mg / ụbọchị
Ndị okenye (afọ 21-80) ≤30 mg / ụbọchị
Rịba ama ： 1. Ọgwụ maka ụmụaka na ndị okenye （3 -80 afọ）
2.Iji maka ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ ụmụ nwanyị na-enye ara ndụmọdụ.
Isi data: Tetrahedron mgbe ị na-etinye maka US NDI
Data na-atụ aro: 10.5mg / g maka OXIS's ADI (Intakeable Daily Intake).
Mwepu na ntinye
(1) MB EXP.
Ka ọ dị ugbu a, ụzọ atọ maka mmepụta EGT: njikọ kemịkalụ, eke bio-mmịpụta (tumadi site na mushrooms, anụ ahụ anụ na mmịpụta ọbara), na usoro biosynthesis.
Tụnyere nke EGT mmịpụta ụzọ
EGT nwere ngwa sara mbara na ihe ịchọ mma, nri oriri, ọgwụ, ọgwụgwọ, biomedicine, wdg.
(3) IHE ND OTHER ỌZỌ NA-EME
Oleoylethanolamide (oea) - ihe anwansi anwansi nke ndu gi
Anandamide vs cbd: kedu nke ka mma maka ahụike gị? Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ha!
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride
Mmeju nke Magnesium l-threonate: uru, onunu ogwu, na ihe ndi ozo
Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye
Top 6 uru uru nke resveratrol Mmeju
Top 5 uru nke ị ofụ phosphatidylserine (ps)
Ihe nlekọta 5 kacha elu na-ewere pyrroloquinoline quinone (pqq)
Ihe kacha mma nootropic nke alpha gpc
Ngwunye kachasị mma nke ịka nká nke nicotinamide mononucleotide (nmn)
1.FREE OZI OZI
2.ỌFỌRỌ RISICALS & Ọrịa
4.L-ERGOTHIONEINE - NEWdị ỌH NEWR OF NKE ANYIO NA-EME
6.NKWUKWU NKE ANTIOXIDATION
7.ỌR FUN ỌRS
8. AKECR OF DEBVR DE
9.ỌMXM & NA NT APKWU